lonetone: ဂျပန် လူငယ်ဘ၀၊ အချစ်၊ အလွမ်း၊ ဆန်းကြယ်မှုတွေကို ထင်ဟပ်တဲ့ Murakami ၀တ္ထုများ မိတ်ဆက်
(Haruki Murakami ရဲ့ Norwegian Wood ၀တ္ထုစာအုပ်)
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရောက်နေပြီး၊ ဘယ်လောက်ပဲ သူတို့ဝန်းကျင်မှာ လှုပ်ရှားသွားလာ လုပ်ကိုင်နေပါစေ၊ ဂျပန်စကားကို လိပ်ပတ်လည် အောင် မပြောနိုင်၊ ဂျပန်စာလည်း ကောင်းကောင်း မဖတ်တတ်၊ နောက် ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံပေါင်းသင်းမှု (socialize) မလုပ်ရင် ဂျပန်တွေရဲ့အကြောင်း ကောင်းကောင်း သိဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဂျပန်မှာ လက်ရှိရောက်နေခိုက်မို့ ဂျပန် ဥပမာ ပေးလိုက်ပေမယ့် အခြားနိုင်ငံများမှာလည်း ယေဘုယျအားဖြင့် အတူတူပါပဲ။
ကျွန်တော်လည်း ဂျပန်စာကို အသက်ကယ် အဆင့် (survival Japanese) လောက်သာ လေ့လာထားတာမို့၊ သူတို့အကြောင်း သိအောင် အခြားနည်းလမ်းတွေ ရှာဖွေရပါတယ်။ နည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုကတော့ အချိန်ရရင် ရသလို၊ ဂျပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်စာပေတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ ရှာဖွေဖတ်ရှု၊ ကြည့်ရှုခြင်းပါပဲ။ ဒီလိုလေ့လာစူးစမ်းရင်းနဲ့ ကျွန်တော်သဘောကျ နှစ်သက်တဲ့ ဂျပန်စာရေးဆရာ တစ်ယောက် ရလာပါတယ်။ သူကတော့ Haruki Murakami ပါ။
(ကိုယ်ပိုင် Murakami စာအုပ်အချို့)
ဂျပန်မှာ ဘယ်စာအုပ်ဆိုင် ကိုသွားသွား အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ စာအုပ်တွေကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျောင်းစာကြည့်တိုက်က နိုင်ငံခြားသား ကျောင်းသားတွေ ဖတ်ဖို့ ညွှန်းထားတဲ့ စာအုပ်စင် (International Students' Corner) မှာလည်း သူ့စာအုပ်တွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့စာအုပ်အချို့ကို မြည်းစမ်းကြည့်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ သူ့စာအုပ်အချို့ကို ဖတ်မိအပြီးမှာ သဘောကျတာကြောင့် မိတ်ဆက်ပေးချင်တာပါ။
(ကျောင်း စာကြည့်တိုက်က International Students' Corner)
ကျွန်တော်အနေနဲ့ တစ်ခါမှ မဖတ်ဖူးသေးတဲ့ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ စာကို စဖတ်မယ်လို့ စိတ်ကူးရင် သူ့ရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး စာအုပ်ကို အရင် ဖတ်လေ့ရှိတယ်ဗျ။ ကိုယ်တွေ့အရ အချို့သော အင်္ဂလိပ်ဝတ္တု (fiction) စာရေးဆရာတွေက စာအုပ်တိုင်းမှာ မကောင်းဘူးဗျ။ မဆွဲဆောင်နိုင်ဘူး။ ကိုယ် ဘာသာစကား အားနည်းတာလဲ ပါတာပေါ့ဗျာ။
ဒါကြောင့် fiction တွေဖတ်မယ်ဆိုရင် အချိန်လည်း မကုန်ရအောင် သူတို့ရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး စာအုပ်ကို အရင်ရှာဖတ်ပါတယ်။ ဒီနည်းက နာမည်ကြီးစာအုပ်ကို မြည့်စမ်းဖူးသွားသလို၊ ဒီစာရေးဆရာက ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးကို ရေးတတ်တဲ့ စာရေးဆရာလဲ ဆိုတာကိုပါ ယေဘုယျ ခွဲခြားနိုင်သွားတာပေါ့။ သူ့အရေးအသားနဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ကြိုက်ရင် နောက်ပိုင်း ဆက်ဖတ်၊ မကြိုက်ရင် ရပ်လိုက်ရုံပါပဲ။
ကျွန်တော် ပထမဦးဆုံး ဖတ်ခဲ့တဲ့ Murakami ရဲ့ ၀တ္ထုက Kafka on the Shore ပါ။ ဂျပန် ရောက်ခါစက ဖတ်ခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး ၀တ္ထုလို့လည်း ညွှန်းကြပါတယ်။ အိမ်ပြေးလူငယ်လေး တစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းကို အခြေခံပြီး ရေးထားတာပါ။ အတိအကျ မမှတ်မိတော့ပေမယ့် ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ်ပါပဲ။ Murakami ရဲ့ အရေးအသားမှာ ဂျပန် လူငယ်တွေရဲ့ ဘ၀ကို ထင်ဟပ်ထားတာ၊ အချစ်၊ အလွမ်း ခံစားချက်တွေကို ပီပီပြင်ပြင် ရေးဖွဲ့ရုံတင်မက လိင်မှုဆိုင်ရာ ရေးသားချက်တွေကလည်း အတော်ပဲ ပွင့်လင်းတာကို သတိထားမိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆိုရင်တော့ ဆင်ဆာထိမှာ အသေအချာပါ။
ကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ့ Murakami ရဲ့ ၀တ္ထုတွေ အားလုံးက ဘာသာပြန်တွေပါ။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် (Harvard University) လို ကမ္ဘာကျော်တက္ကသိုလ်တွေမှာ ဂျပန်စာပေ၊ ဘာသာစကားကို အထူးပြုလေ့လာ၊ ကျွမ်းကျင်ကြတဲ့ ပါမောက္ခများက ဂျပန်ဘာသာကနေ ဘာသာပြန်ဆို ထားကြတာပါ။ ဒါကိုတောင်
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဂျပန်လူမျိုး ပါမောက္ခတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေက "တချို့ဘာသာပြန်မှုတွေက ဆိုလိုရင်း မရောက်ဘူး၊ တချို့ဂျပန်စကားလုံးတွေဟာ အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ဆိုလို့ မရနိုင်ဘူး" လို့ စောဒဂတက် ကြပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်လို ဂျပန်စာ မတတ်သူ (Japanese language illiterate) အတွက်ကတော့ ဒီလို ဘာသာပြန်ဆိုမှု တွေကြောင့် ဂျပန်ဝတ္ထုတွေနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ရလို့ ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။
Murakami ရဲ့ အချို့ဝတ္ထုတွေက အတော်ထူပေမယ့် အချို့ဝတ္ထုတွေကတော့ ခပ်ပါးပါး၊ ခပ်တိုတိုပါပဲ။ ကျွန်တော်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ၀တ္ထုတွေ ထဲက After the Quake နဲ့ After Dark ဆိုရင် ဇာတ်လမ်းက ခပ်တိုတိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် စာဖတ်သူကို အတော် ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။
မှတ်မိသလောက် ပြန်ပြောရင် After the Quake က ၁၉၉၅ ခုနှစ်က ဂျပန်နိုင်ငံမှာ လှုပ်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော် ကိုဘေးငလျင် (Kobe Earthquake) ကို အခြေခံပြီး ရေးထားတာပါ။ ကိုဘေးငလျင် လှုပ်တုန်းက ကျွန်တော်က (၁၀) တန်းကျောင်းသား ဆိုတော့ မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေပါတယ်။ ဒီဝတ္ထု ဖတ်လိုက်ရတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ မြန်မာ့အသံက ငလျင်သတင်းကိုတောင် ပြန်မှတ်မိသွားတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဝတ္ထုဖတ်အပြီးမှာတော့ ကိုဘေးကို မကြာခဏ ရောက်ခဲ့ပေမယ့်လည်း၊ မသွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိုဘေးငလျင်ပြတိုက် (Kobe Earthquake Museum) ကို အရောက်သွားခဲ့တယ်။ အတော် ဗဟုသုတရပါတယ်။ ဂျပန်ရောက် မိတ်ဆွေများ မရောက်သေးရင် သွားဖို့ ကြုံတုန်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
(ကိုဘေးငလျင်ပြတိုက် - Kobe Earthquake Museum)
(ငလျင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၅ ခုနှစ် နဲ့ ကိုဘေးငလျင်ပြတိုက်)
After Dark ကတော့ တိုကျိုက တစ်ညတာ အဖြစ်အပျက်ကို ရေးထားတာပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး အချစ်ဟိုတယ် (Love Hotel) အကြောင်းလည်း ထည့်သွင်းရေးထားလို့၊ ကိုယ်တိုင်မရောက်ဖူးသေးရင် စာအုပ်ထဲကနေ အရောက် သွားနိုင်ကြပါတယ်။
Murakami ရဲ့ မကြာသေးခင်ကမှ ဂျပန်ဘာသာနဲ့ ထုတ်ခဲ့တဲ့ 1Q84 ဆိုရင် ဂျပန်မှာ ကြိတ်ကြိတ်တိုး ၀ယ်ယူခဲ့ကြပြီး၊ နှစ်ပတ်အတွင်း မှာတင်ပဲ အုပ်ရေ တစ်သန်း ရောင်းရတယ်လို့ The Japan Times သတင်းစာက ဆိုပါတယ်။
(The Japan Times သတင်းစာပါ 1Q84 စာအုပ်အညွှန်း)
Kafka on the Shore လို နောက်ထပ် နာမည်ကြီးတဲ့ စာအုပ်ကတော့ ၁၉၈၇ မှာထုတ်ခဲ့တဲ့ Norwegian Wood ပါ။ ဒီစာအုပ်ကြောင့် Haruki Murakami ဆိုတဲ့ နာမည်တစ်လုံး ရပြီး၊ ထင်ရှားကျော်ကြား လာတာပါ။ ဂျပန်ပြည်တွင်းမှာတင် အုပ်ရေ (၁၀) သန်း နဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ဘာသာပြန်ဆိုပြီး အုပ်ရေ (၂) သန်းကျော် ရောင်းပြီးပြီတဲ့ဗျ။
မြန်မာ့လူဦးရေရဲ့ နှစ်ဆကျော် ရှိတဲ့၊ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ စာဖတ်အားကို ဒီနေရာမှာ အသိအမှတ်ပြု ရမယ်ဗျ။ မြန်မာ့လူဦးရေ သန်း ၅၀ ကျော်မှာ စာအုပ်တစ်အုပ် (၀တ္ထု ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ၀တ္ထုမဟုတ်သော စာပေပဲ ဖြစ်ဖြစ်) ကို အုပ်ရေ ထောင်ဂဏန်း၊ သောင်းဂဏန်း ကုန်ဖို့၊ ထုတ်ဝေနိုင်ဖို့ မနည်း ကြိုးစားရကြောင်း ကြားရတာဟာ ကျွန်တော်တို့တွေ စာဖတ်နည်းနေ သေးကြောင်း နဲ့ ဆုတ်ယုတ်မှုကို အထင်အရှား ပြတာပါပဲ။
Norwegian Wood ကတော့ ရုပ်ရှင်အဖြစ် မကြာခင် မှာကြည့်ရတော့မှာပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းကို ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ့် ဒါရိုက်တာကတော့ ရိုက်ကူးခွင့်ရဖို့ Murakami နဲ့ လေးနှစ်ကြာ ခက်ခက်ခဲခဲ ညှိနှိုင်းခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
(မကြာခင် ကြည့်ရတောမယ့် Norwegian Wood ရုပ်ရှင်)
စာရေးဆရာနဲ့ မိတ်ဆက်ရရင်၊ Murakami ကို ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှာ ကျိုတိုမှာ မွေးခဲ့ပြီး၊ အခုလက်ရှိ တိုကျိုနားမှာ နေတယ်လို့ ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေရဲ့ အစမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့စာအုပ်တွေကို ဘာသာစကားပေါင်း (၄၀) ကျော်ဘာသာပြန်ဆို ပြီးပြီ်လို့လည်း ဆိုတယ်ဗျ။ (ဆင်ဆာလွတ်ရင်တော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့စာအုပ်တွေကို ဘာသာပြန် ချင်ပါသေးတယ်။)
သူ့ကို စာပေဝေဖန်ရေး ပုဂ္ဂိုလ်များက စာပေ နိုဘယ်လ်ဆု (Noble Prize) ပေးဖို့အထိတောင် ထောက်ခံရေးသားပြီး၊ တချိန်မှာ ရဖို့ အလားအလာ ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ Murakami ဟာ ၀တ္ထုရေး စာရေးဆရာ သက်သက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်ရပ်မှန်စာအုပ် အပါအ၀င်Truman Capote, John Irving စတဲ့ ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာ အချို့ရဲ့ စာအုပ်တွေကိုလည်း ဂျပန်ဘာသာကို ပြန်ဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။
Murakami ရဲ့ ၀တ္ထုတွေဟာ ဂျပန်လူငယ်တွေရဲ့ သဘော သဘာဝကို ထင်ဟပ်တယ်။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တယ်။ ၀တ္ထုဆိုပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံကို နောက်ခံထား ရေးသားထားလို့ ဂျပန်အကြောင်းလည်း ပိုသိရပါတယ်။ နောက် ကိုယ်လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့ ၀န်းကျင်နေရာတွေ (ဥပမာ၊ ဂျပန်က နာမည်ကျော် စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ စုရပ်ဘူတာတွေက အစ) ကို နာမည်နဲ့တကွ ထည့်သွင်းရေးထားလို့ ဂျပန်ရောက် မိတ်ဆွေများ စိတ်ဝင်စားမယ် ထင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ရာမှာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း လွယ်လွယ်ကူကူ ပြန်ဆိုထားလို့ နားလည်လွယ်ပြီး၊ စာဖတ်သူတွေကို အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်စေမှာ မလွဲပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများ အလုပ်ခွင်တာဝန်တွေ၊ ကျောင်းစာတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ၀တ္တုမဟုတ်တဲ့ (non-fiction) စာအုပ်တွေ ဖတ်ပြီး ခေါင်းရှုပ်နေခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ Murakami ရဲ့ ၀တ္ထုတွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖတ်ရင်း အပျင်းပြေ၊ ပညာရဖို့ ညွှန်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၆) ရက်
(ဒီပို့စ် ရေးအပြီးမှာပဲ (ဆရာ) မြတ်သစ် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ Murakami ရဲ့ ၀တ္ထုတိုတစ်ပုဒ်ကို စကားဝါမြေ (မြန်မာ ebooks ဆိုဒ်) မှာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ရှာတွေ့ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများ ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေ ဖတ်ရှုနိုင်ကြောင်းပါ။)
Posted by lonetone at 6:26 AM
Labels: ဂျပန်နိုင်ငံ အတွေ့အကြုံများ နှင့် ထင်မြင်သုံးသပ်ချက်, စာအုပ်များ
P.Ti November 30, 2010 at 1:28 AM
ကျွန်တော့် ဘလောိ့ကု လာပြီး စာဖတ်သွားလို့ ကျေးဇူးပါ။ Link လုပ်ဖို့ အတွက် ခွင့်တောင်းစရာမလိုပါဘူး ခင်ဗျာ...
အဲဒီက အတွေ့အကြုံလေးတွေရေးပေးတော့ ဗဟုသုတရတာပေါ့။ များများရေးပေးပါ။ :)
ခွန် November 30, 2010 at 2:54 AM
ခုတလော နာမည်ကြီးနေတဲ့ 1Q84ရောဖတ်ပြီးပလား အစ်ကို။ သူလည်းဆိုင်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ကုန်တာဘဲတဲ့ :)
lonetone November 30, 2010 at 8:51 AM
ဖတ်ကြည့်ပါဗျ။ ကြိုက်သွားမယ် ထင်ပါတယ်။ 1Q84 က ကျွန်တော် သိသလောက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် မထွက်သေးဘူးဗျ။ နောက် Murakami ရေးသမျှထဲမှာ စာမျက်နှာ အများဆုံးလို့ ဆိုတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်ကတော့ သူရေးတဲ့ စာအုပ်တွေထဲက ပါးတဲစာအုပ်တွေ၊ ၀တ္ထုတိုတွေ အရင် ရွေးဖတ် ဖြစ်နေတယ်ဗျ။
ငသော် December 1, 2010 at 9:13 AM
မှန်၏။ သူတို့တွေ စာတော်တော်ဖတ်၏။
Unknown December 10, 2010 at 3:11 AM
Myanmar Good Knowledg Co., Ltd February 13, 2011 at 6:30 AM
Thu February 25, 2011 at 2:42 PM
A noticeable thing is most Myanmar schlors who studied in Japan are more skillful in Japanese rather than English. I've seen they can easily convince Japanese movies, fluent in speaking even returned after seveal years. It may be Asian instinct.
Myagreen March 15, 2011 at 2:05 AM
Worry for you. Wish you ok!
Myagreen March 15, 2011 at 2:08 AM
I amareader of your blog. Wish you ok! Takecare!
lubo601 April 6, 2011 at 11:04 AM
ဒီစာလေးကို ကြိုက်လို့ ကျနော့်ဘလောက်လေးမှာ တင်ခွင့်ပြုပါ။
ကျနော့် ဘလောက်လေးက lubo601.blogspot.com ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေလိုသဘောထားနိုင်ပါတယ်။
Myanmar Good Knowledg Co., Ltd April 13, 2011 at 11:48 PM
တီချမ်း April 17, 2011 at 3:02 PM
ဝက်ဆိုက်တခု အတွက် တီ့ ပိုစ့်အဟောင်းတွေ ပြန်ဘတ်နေရင်းနဲ့
ကွန်မန့်ပေးထားတဲ့ လင့်ကနေ ရောက်လာတယ်
တီလဲ လောလောဆယ် အရင်မြန်မာပြန်ဘတ်ပြီးသား တော့တိုးကျန် ကို အီး ဘာသာပြန်ဘတ်နေတယ်
tetsuko kuroyanagi ရဲ့ totto-chan (the little girl at the window
လုံးတုံး ပြောတာလဲ ရှာဘတ်အုံးမယ်
ဂျပန် လူငယ်ဘ၀၊ အချစ်၊ အလွမ်း၊ ဆန်းကြယ်မှုတွေကို ထင...